‘हीरामणि–झुमा दाहालको परिकल्पना’ सार्वजनिक
काठमाडौँ । हीरामणि दाहाल र झुमा दाहालद्वारा लिखित ‘हीरामणि–झुमा दाहालको परिकल्पना’नामक कृति सार्वजनिक गरिएको छ । कृतिको रुपाखेती दाहाल कूल कल्याण प्रतिष्ठानले यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा साहित्यकार श्...
मंसिर–पुषको जाडो । बिहानको आठ बजिसकेको रहेछ । चिसो कोठाबाट बाहिर जाँदा अर्कै मज्जा अलिअलि घाम लागे पनि जिउ त्यत्ति खुलेको छैन । त्यसमाथि आज शनिबार । कार्यालय जान नपर्ने हो । आ– के हतार–हतार दौडेकी ए र...
पल्सरवाला बोका दाई
मानिस सबै एकै धर्तिमा जन्मेपनि ऊ जन्मने परिवेश ठाउँ अनुसार फरक-फरक हुन्छ । जन्मदाखेरी जस्तो वातावरणमा ऊ हुर्किन्छ ,त्यस्तै उस्ले आफ्नो बानी व्यवहारमा अनुसरण गर्न थाल्दछ । गरिब परिवार ,दुर्गम ठाउँमा उस...
‘कोइराला र भिक्षुपछिका नयाँ कथा’
काठमाडौँ । कथाकार महेश पौड्यालका कथामा मानवीय संवेदना, मानवीय सम्बन्ध र मनोविज्ञान प्रशस्त रहेको समीक्षकहरुले बताएका छन् । ऐश्वर्य प्रकाशनद्वारा प्रकाशित उनको नवीनतम कृति ‘त्यसपछि फुलेन गोदावरी’को वि...
दर्जनौ पढेलेखेका सुन्दर बेरोजगार युवतिहरूको भिड बाट मैले तिमिलार्इ यो पोस्टमा आकर्षक तलब दिएर किन छनोट गरेँ थाहा छ ? घुम्ने कुर्चीबाट उसले सामने बसेकि युवतिलार्इ प्रश्न गर्यो । “हो सर ,मलार्इ थाहा छ,...
एक रात नर्सको कोठामा
उ एप्रोनमा अझ बढि सुन्दर लाग्छे । अझ मास्क लगाएको बेला लुकि लुकि पुलुक पुलुक गर्ने आँखाहरु झनै सुन्दर लाग्दा हुन । तर उस्को सौन्दर्य पिञ्जडामा हुन्छ सधै । किनकी आँखामा गाजल पर्नु हुदैन– ड्युटिको बेला...
गोविन्द लाई बचाऊ यदि उनी मरे भने !
उसलाई बचाउ यदि उनी मरे भने ! रमितेहरुले रमित हेर्ने छन माफियाहरुले फेरि उस्तै खालको अभियान थाल्नेछन, अनि गरिवका छोराछोरीलाई अवसरबाट बञ्चित गर्नेछन ।। ह्रार्नेहरुले आँशु पक्कै खसाल्ने छन ह्रार...
यही छ पहाड यही छ मधेश वीर नेपाली किन जान्छौ विदेश यही छ हिमाल यही छ बेसी हे देशभक्त किन हुन्छौ विदेशी जीवन आखिरमा हो दुई दिन नतिरिकन आमाको दुधको ऋण छोडेर जन्मे हुर्केको प्यारो देश त्यागेर पहिचा...
अब अन्नारोभियाले कपाल बाटेको हेर्न मन छ मलाई । अहिले सम्म उस्ले कपाल बाटेको देखेको छैन । हमेशा उस्को कपाल आकाशको बादल जस्तो हुन्छ । फुक्का । कालो कपालमा कैलो कलर गरेको । त्यो कपाल धागोले बाध्दा उ कस्त...